Kunena Credits Team
Kunena Forum - credits Team
Kunena Forum ® waa joogtid mashruuca il furan ah ku xiran That dadaalkii iyo maal waqtiga shaqaalaha laga soo contributors kala duwan. Version Tani ayaa waxaa suurtageliyey by the Kadib contributors :
Florian sanayd Fitto
Horumarinta iyo Design
Dhexdhexaadinta Forum iyo Imtixaanka
Team Kunena The jeclaan lahaa inaan u mahad beesha waayo caawimo iyo taageero. Waxa kale oo aanu mahad celineynaa shaqada adag ee qof kasta oo ay leeyihiin turjumay Kunena intomany luqado kale. Intaa waxaa dheer, waxaana jeclaan lahaa inaan u mahad badan oo ka tirsan www.kunena.org, Hore iyo mid hadda, kuwaas oo ay leeyihiin darsatey iyo caawisay dhigi this version a more deggan iyo bugfree.
Si aad u soo celi forumka riix halkan
Copyright © 2008 - 2020 Kunena, Shatiga: + Video Reserved